Its version dib-u-soo daabacay ka kooban Hordhaca ah Arar iyo shan cutubyada ugu weyn Qaybo kuwaasoo mid walba uu yahay sub-qaybsan Qaybo Xubno. Hadda waxaa jira guud ahaan Articles Qodobo marka loo eego hore Articles. Taariikh Somaliland ayaa dukumentiyada kale ee dastuuriga ah ee muhiimadda taariikhiga ah oo ka heshiisyada caalamiga ah ee ay beelaha Somaliland kala duwan saxiixday dawladda Britain u dhaxayn, iyo diyaarinta dastuurka kala duwan ka hor xornimada in Declaration of Dib-u-caddaynta of Xukunka ee Burco oo ka mid ah shirarka horeyn grand oo ka mid ah beelaha Somaliland. Inkastoo Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa madax-bannaan muddo gaaban ee June , waxaa ka dib midaysan la Talyaani Somaliland si ay u sameeyaan Soomaaliya. Inta lagu jiro muddada gaaban in dastuurka dhamaystiran ma la ansixiyay. The State of Somaliland lahaa gaar Dastuurka waxaa la qoray horraantii kii, oo ahaa kooban meel.
Muwaadiniinta Somaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqada, lab iyo dhedig, hantida, mudnaanta, afkaarta iwm, waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman. Kala sarraynta iyo takoorka ku salaysan issirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban yihiin, isla markaa barnaamijyada lagu cidhib tirayo dhaqamada xunxun ee jireenka ah waa waajib Qaran. Ajaanibka dalka Somaliland sharci ku jooga waxay xeerka hortusa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la siman tan muwaadiniinta, oo ay ka reebban tahay xuquuqda siyaasiyiga ah ee muwaadiniinta u gaarka ah.
Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan. Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jiray Soomaaliya la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand.
Waxay aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xallilo dariiq nabadeed iyo wada-hadal; waxay dhawraysaa jiritaanka soohdimaha dalalka kale. Waxay ku dadaalaysaa in colaaddii raagtay oo dhex ooli jirtay dalalka Geeska Afrika lagu beddelo is af-garad iyo isku soo dhawaansho. Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene. Maal-gelinta shisheeyaha ee dalka gudahiisa Dawladdaa damaanad qaadaysa; xeer baana lagu nidaaminayaa.